I-Acrestate ye-Trestolone (MENT) i powder (6157-87-5) hplc =98% | I-SASMS i-AASraw
/ iimveliso / I-steroid powder / I-Trestolone Acetate (MENT) ipowder
Akukho kalo SKU: 6157-87-5. Udidi: I-steroid powder
I-AASraw ngumenzi oqeqeshiweyo we-Trestolone Acetate (MENT) powder ene-lab ezimeleyo kunye nefektri enkulu njengenkxaso, yonke imveliso iya kwenziwa phantsi kolawulo lweCGMP kunye nenkqubo yokulawula umgangatho olandelwayo. Inkqubo yokubonelela izinzile, zombini ii-odolo zokuthengisa kunye nee-wholesale zamkelekile.
I-Trestolone Acetate (MENT) ividiyo ye powder
I-Trestolone Acetate (MENT) ipowder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-Trestolone Acetate (MENT) ipowder
Ubunzima Ezinto: 330.465
I-Acrestate ye-Trestolone (MENT) yokusetyenziswa kwepowder kumjikelezo we-steroids
I-testolone i-Acetate powder (i-CAS 6157-87-5) idla ngokuba yi-PENT powder.
I-PENT powder (CAS 6157-87-5) Ukusetyenziswa
Ngomthamo omkhulu we-50 mgs ngosuku, abasebenzisi banokulindela inzuzo eninzi kwiinyanga ezintathu zokusetyenziswa. Kunokwenzeka ukwandisa amanqanaba omandla kunye nobunzima be-muscle kunye nenzuzo yesisindo esimalunga nama-20 pounds ngeli xesha.
Isilumkiso kwi-Trestolone Acetate powder
Ifom ye-Trestolone Acetate powder (i-CAS 6157-87-5) ithathwa njengeyona ndlela yokuhanjiswa kwe-anabolic steroid ngelixa iifom zomlomo ziza kuvelisa iziphumo ezincinci. Kufuneka iqatshelwe into yokuba idosi isisitshixo. Nabani na osebenzisa i-Trestolone Acetate powder kufuneka alandele yonke imiyalelo yedosi kwileta ukuze kuthintelwe iziphumo ezibi. Umthamo ofanelekileyo uya kuzisa nezona ziphumo zibalaseleyo xa zisetyenziswa ngokungaguqukiyo ngaphezulu kwexesha elide.
Kwabo bazimisele ngokupheleleyo ukufezekisa umzimba wabo, baya kuphanda amathuba amaninzi ukuze bafikelele kwiinjongo zabo zokufaneleka. Ukusetyenziswa kwe-Trestolone i-Acetate powder yindlela enye yokufezekisa umzimba oqhenqileyo, ohloniphekileyo onokufumana inzuzo enkulu. Kunokwenzeka ukuphumeza iziphumo ezintle ngaphandle kwemiphumo emibi, esinye isizathu sokuba abaninzi baza kuhlola i-Trestolone Acetate powder nezinye i-anabolic steroids.
I-Trestolone i-Acetate powder (i-CAS 6157-87-5)
I-Trestolone Acetate powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Trestolone i-Acetate powder; uthenge i-powder MENT esuka ku-AASraw